Akụkọ - Kedu ụdị akpa akpa n'ime igbe
Akpa mmiri na -emebi emebi
Jerry Nwere ike ọkara
Igwe na -ejuputa
Kedu ụdị akpa akpa n'ime igbe
Ndị akpa-na-igbebụ ụdị nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ. Akpa ahụ bụ PET aluminized, LDPE, na ihe mejupụtara nylon, ihe na -adịghị mma ma sie ike, a na -ejikwa akpa na katọn.
Akpa akpa bụ nke ngalaba gburugburu ebe obibi n'ihi na o nwere ọrụ gburugburu ebe obibi nke ngwaahịa plastik enweghị, oge ya ga-emebi emebi dị ala karịa nke akpa rọba.
Nkwakọba n'ime igbe nwere uru asọmpi doro anya, dị ka ogologo ndụ nchekwa, ọkụ ka mma na ihe mgbochi ikuku oxygen, jiri obere ihe wee nwee ike megharịa ya, nwere ike ijikwa ọtụtụ ngwaahịa n'otu ngwa ndozi, nwere ike dabara maka aseptic/non-sterile/cold/hot filling/multiple handling process, site na ọkara akpaka ruo ngwa njuputa zuru oke maka nhọrọ na-agbanwe agbanwe, melite nchekwa na arụmọrụ ụgbọ njem, melite nchekwa na arụmọrụ njem. Mbelata nchekwa na ụgwọ ụgbọ njem, ọnụ ahịa nkwakọ ngwaahịa dị ala, wdg.
Nkwa akpa n'ime igbe ejirila ya n'ọtụtụ ebe nri, ihe ọ beụ andụ na ụlọ ọrụ dị iche iche, na-aghọ ụdị ahịa na-eto ngwa ngwa nke nkwakọ ngwaahịa igbe-igbe dị mfe iji chekwaa na ibufe ngwaahịa, ihe ime na mpụga bụ ihe eji eme gburugburu ebe obibi, na-eji obere ihe iji belata oriri mmanụ ala.
Tụnyere nkwakọ ngwaahịa siri ike nke ọdịnala, ọ na -echekwa ihe dịka 35% nke ụgwọ njem na nchekwa, na -emepụta 85% obere ihe mkpofu karịa karama, ma na -ewepụta ikuku anwụrụ ọkụ carbon dioxide dị 55% karịa ka karama n'ihi ịdị arọ ya. Ọnụ ego ihe nkwakọ ngwaahịa dị ala karịa ụdị nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ (dịka karama PET, karama iko, mgbọ rọba, wdg).
Igbe akpa na iji ihe nkwakọ ngwaahịa dị obere bụ naanị 1/5 nke akpa siri ike.
Ihe nkwakọ ngwaahịa igbe-dị n'ime igbe dị mfe ikewapụ mgbake, enwere ike imegharị ya.
Enwere ike ịkpakọba akpa ma chekwaa ya tupu na mgbe ejiri ya, na-ebelata oke nkwakọ ngwaahịa na ụgwọ njem yana ibelata oriri ike.
Ọtụtụ n'ime akpa-n'ime-igbe bụ otu-iji, na-ezere mmetụta nke ọgwụ kemịkal na nhicha na gburugburu ebe obibi na mmebi.
Oge ezipụ: Oct-13-2021
Ngwa nkwakọ ngwaahịa KAIGUAN bụ akpa ọchị (akpa kwụ ọtọ na igbe), ldpe cubitainer, akpa mmiri na-akụda, obere mpịachi jerry nwere na igwe ndochi.
Mba 15, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China.
Copyright - 2010-2022: Ikike Niile Echekwabara.